Han TinAung on Flipboard
62 Flips | 1 Magazine | @hantinaung1 | Keep up with Han TinAung on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Han TinAung”
ရွှေဂုံတိုင်ရှင်းတမ်း(စတုတ္ထပိုင်း)<br>ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း (၂၇-၁-၂၀၁၄)<p>ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း၏ စတုတ္ထအဆင့်<br>နောက်တစ်နေ့(ဧပြီလ ၂၈)ရက် ဆွေးနွေးပွဲ၏ …
ရွှေဂုံတိုင်ရှင်းတမ်း (တတိယပိုင်း)<br>ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ( ၂၆-၁-၂၀၁၄)<p>ရွေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း၏ တတိယအဆင့်<br>၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၂၇)ရက်နေ့သည် တနင်္လာနေ့ ဖြစ်ပါသည်။ …
ရွှေဂုံတိုင်ရှင်းတမ်း (ဒုတိယပိုင်း)<br>ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း (၂၄-၁-၂၀၁၄)<p>ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း ဒုတိယအဆင့်<br>နောက်ဆုံးတွင် (၂၀၀၉ )ခုနှစ် ဧပြီလ(၂၈-၂၉) …
ရွှေဂုံတိုင်ရှင်းတမ်း (ပထမပိုင်း) ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း
လစ်ဘရယ်နဲ နီ ယို ကွန်ဆာဗေးတစ်အားပြိုင်မှု ( မိုးသီးဇွန်)<br>June 17, 2014 at 6:02pm<p>ရဲဘော်သက်ဦးရဲအမှာ -<p>...<p>(ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ လိုအပ်နေတဲ့ …
On Monday, the northern Iraqi city of Tal Afar fell to jihadist insurgents, making it the third major centre in Iraq to fall in less than one week. This was the latest setback for Iraq’s government, which has been trying to re-establish control over the country’s north, since it was overrun by the …
Why China is under- and over-nourished at the same time. With rising incomes and more diverse diets, Chinese people are consuming much more fatty food and fizzy drinks. Meals now contain more than twice as much oil and meats as in the 1980s.This is producingahealth calamity, both in heart disease and diabetes, which is closely linked to obesity. http://econ.st/TNe9lt
Home<br>Galaxy Note4တွင် ၅.၇ လက်မ QHD screen ပါဝင်မည်<p>Samsung ၏ Galaxy Note4တွင် ယခင် Note3အတိုင်း ၅.၇ လက်မ screen ကို အသုံးပြုထားသော်လည်း ၎င်းသည် QHD …
ငှက်များကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဝါသနာပါသူတို့အတွက် Birdsnap<br>=====================================<p>ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအနေဖြင့် လက်ထဲတွင် …
This article has been converted from Zawgyi One to Unicode<p>Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.<p>၈ …
သာကေတ တံတားသစ် တည်ဆောက်ရန် ဂျပန်အစိုးရက ကန်ဒေါ်လာ ၄၁ သန်း ကူညီမည်
သာကေတတံတားအသစ် ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်နှင့် မြန်မာအစိုးရတုိ့ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှ …